Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi Oo Majaro Habaabisay Khilaafkii U Dhexeeyey Ganacsade Axmed Cismaan Geele iyo Jabuuti | Radio Hormuud
Xukuumada Madaxweyne Muuse Biixi Oo Majaro Habaabisay Khilaafkii U Dhexeeyey Ganacsade Axmed Cismaan Geele iyo Jabuuti
Hargeysa(RH)Madaxtooyada Somailand ayaa goordhaweyd soo saartey War-saxaafadeed ay kaga hadleyso khilaafka u dhexeeya Ganacsade Axmed Cismaan Geele iyo Xukuumada Jabuuti
War-saxaafadeedkaasina Waxaa Uu u dhignaa sidan:-
12-kii bishii March, 2018, waxa dalka yimid Agaasime Ku-xigeenka Baanka weyn ee Faransiiska ah ee BRED, oo ah baanka iska leh faraca baan ee BCI Mer Rouge iyo Agaasimaha Guud ee faraca baanku ku leeyahay dalka Jabuuti Mr. Nadhir Zouaghi. Labada Mas'uul ee ka socda Baanankaa Faransiiska ahi waxay sheegeen in ay lacag deyn ah oo dhan 20 Milyan oo doolar ku leeyihiin Shirkadda GSK iyo Mulkiilaha Shirkaddaasi Axmed Cismaan Geelle.
15-kii bishii February, 2018, waxa dalka yimi Safiirka Dalka Faransiiska u fadhiya dalka Kiiniya, Ambassador Antoine Sivan, oo sita go'aannada Maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Jabuuti ee la xidhiidha arrinta daynta Baanka Faransiiska ahi ku sheegaynayo Mulkiilaha Shirkadda GSK, Axmed Cismaan Geelle. Waxa kale oo uu sheegay in ay dacwac ka dhan ah Shirkadda GSK u gudbiyeen Booliska Caalamiga ah ee INTERPOL.
Xukuumadda Somaliland waxa ay ku dooday in ay fulin karto oo kaliya garta lagu qaado Maxkamadaha Somaliland, maadaama Ganacsade Axmed Cismaan Geelle hadda yahay muwaadin reer Somaliland ah, go'aammada maxkamaha dalalka Faransiiska iyo Jabuuti ka soo baxayna ay iyaga u gaar yihiin. Balse Safiirka Faransiisku waxa uu ku dooday in Axmed Cismaan Geelle yahay muwaadin reer Jabuuti ah, daynta baanka Faransiiska ahna uu qaatay isaga oo ah muwaadin reer Jabuuti ah.
Dood dheer kadib, waxa la isla qaatay in dacwadda daynta lagu qaado maxkamadaha Somaliland, iyada oo haba-yaraatee wax tixgelin ah la siinin go'aamadda ka soo baxay Maxkamadaha dalalka Faransiiska iyo Jabuuti midna. Waxa in badan lagula taliyey Ganacsade Axmed Cismaan Geelle in lacagta daynta ah iska bixiyo mar hadduu qiraal yahay. Balse ganacsaduhu arrintaa wuu ka cajiiday.
Sidaas darteed, Baankii Faransiiska ahaa wuxuu qabsaday Looyar reer Somaliland ah, kaas oo uu bilaabay in uu soo diyaarsado qoraallada iyo waraaqaha la xidhiidhaha dacwadda daynta Baanka Faransiiska ahi ku sheeganayo Ganacsade Axmed Cismaan Geelle. Sida curfiga Caalamiga ahi dhigayo, waxa dhammaan waraaqaha Looyarku keenay ee ka soo baxay Dawladaha dalalka Faransiiska iyo Jabuuti uu soo mariyey Wasaaradda Arrimaha Dibedda iyo Iskaashiga Caalamiga ah iyo Wasaaradda Caddaalada Jamhuuriyadda Somaliland si loo hubiyo in waraaqahani si rasmi ah uga soo baxeen dawladaha iyo hay'adaha dawliga ah ee ay magacooda sitaan. Waana hab Caalami ah oo loo xaqiijiyo qoraallada iyo waraaqaha iskaga gudbaya Dawladaha.
Dawladda iyo Shacabka Somaliland waxa ay raadinayaan ictiraaf Caalami ah, waxaanay iska ilaalinayaan wax kasta oo u ekaysiinaya dalka Somaliland meel aanay ka jirin shuruuc iyo kala dambayn, lagulana soo dhuunto hantida iyo xoolaha umadaha kale ee adduunka laga soo dhaco